Horudhac: Barcelona vs Real Madrid… (El Classico-dii ugu horreysay xilli ciyaareedkan oo kulmineysa da’yar ku hibeysan kubadda cagta & Jordi Alba oo…) – Gool FM
Ahmed Nur October 24, 2021
(Barcelona) 24 Okt 2021. Ciyaarta El Classico ayaa la baasan doonaa galabta markii ugu horreysay xilli ciyaareedkan marka ay naadiga Barcelona garoonkeeda Camp Nou kusoo dhoweyso dhiggeeda Real Madrid kulan ka tirsan horyaalka La Liga.
In ka badan 10 sano ayaa kulankan la ciyaari doonaa iyadoo labada naadi aysan ka tirsaneyn xiddigaha ugu awoodda badan kubadda cagta casirga ee Lionel Messi iyo Cristiano Ronaldo kuwaasoo haatan ka kala tirsan Paris Saint-Germain iyo Manchester United.
Barca ayaa kaalinta siddeedaad ka fadhisa horyaalka dalka Spain iyadoo leh 15 dhibcood, waxayna labo dhibcood ka dambeysaa Madrid oo kaalinta saddexaad fadhisa iyadoo heysata 17 dhibcood.
Saacadda ay ciyaarta billaabaneyso: 05:15 Galabnimo xilliga Geeska Afrika.
Ronald Koeman oo hoggaamiya Barcelona ayaa wajahaya walaac ku aaddan dhaawaca Jordi Alba kaasoo aanan tababarka ka qayb qaadan tan iyo ciyaartii Dynamo Kyiv ee toddobaadkii hore ka tirsaneyd Champions League inkastoo uu usoo xushay safkiisa ciyaartan, hase ahaatee, waxaa si toos ah u maqnaan doona Pedrid, Ronald Araujo, Ousmane Dembele iyo Martin Braithwate kuwaasoo dhaawacyo kala duwan qaba.
Dhinaca kale, caksiga dhiggiisa, macallinka Real Madrid ee Carlo Ancelotti ayaa ka bad qaba cabsida dhaawacyo cusub waxaana ka maqnaan doona kaliya Dani Ceballos iyo Gareth Bale, waxaana ciyaartan xaadir u ah Eden Hazard.
Barcelona ayaanan wax guul ah gaarin mid kasta oo ka mid ah afartii ciyaarood ee ugu dambeysay oo ay kaga hortagtay Real Madrid horyaalka La Liga hal barbarro iyo saddex guuldarro ayaanan ku xardhan, haddii ay galabta guul gaari weyso waxay u noqon doontaa rikoorkeedii guul la’aanta ugu dheer ee hal naadi kale ka qabsata tan iyo May 2008 markaasna isla Los Blancos ayaa shan kulan oo xiriir ah guul u diidday oo labo barbarro iyo saddex guuldarro u saarisay.
Real Madrid ayaa guuleysatay dhammaan saddexdii ciyaar ee ugu dambeysay ay dhammaan tartammada ku wajahday Barcelona, waxayna The Merengues heysataa fursad ay dhiggeeda kaga adkaan karto afar kulan oo xiriir ah markii ugu horreysay tan iyo 1965 markaas oo ay toddobo xiriir ah ka qaadatay.
Kaddib guuldarradii kasoo gaartay Espanyol kulammadii siddeedaad ee horyaalka, Real Madrid ayaa halis ugu jirta inay labo kulan oo xiriir ah guuldarro la kulanto markii ugu horreysay xilli ciyaareedkii 2018-19 oo labadii kulan ugu dambeeyay horyaalka la garaacay.
Kulanka galabta ayaa u noqonaya Barcelona El Clasico-dii ugu horreysay kaddib Lionel Messi, waxaana Messi uu ku hoggaamiyay inay 19 guul ka gaarto kulankan 45 ciyaarood oo uu dheelay, waxaana u raacsan 26 gool oo uu dhaliyay muddadaas.
Horudhac: Manchester United vs Liverpool... (Rikoorka uu Rashford ka heysto Reds, Salah oo rikoor ku sameyn kara Old Trafford, xaaladda dhaawac ee xiddigaha Red Devils & Wax walba oo aad ugu baahantahay kulanka ugu weyn Premier League)